PDF to PowerPoint Converter v1.0.0.8 Portable
ဒါကတော့ pdf ကနေ powerpoint ကို ပြောင်းတဲ့ converter ပါ . Powerpoint သမားများ အတွက် တင်ပေးလိုက် ပါတယ် . အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ် . text ကော photo ကော နှစ်ခုစလုံး အတွက် powerpoint ကို ပြောင်းလို့ ရပါတယ် . စမ်းကြည့်လိုက်ပါ .
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:28 AM